यौन स्वास्थ्य Archives - SandeshBahak
Category: यौन स्वास्थ्य
१३ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०५:४३ August 30, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on नयाँ काम थाल्दै हुनुहुन्छ ? पाथीभरा माताको दर्शन गर्दै १३ भाद्रको राशिफल हेर्नुहोस्,
मेष राज्यबाट मान सम्मान पाइनेछ । कुटुम्बको सहयोग मिल्नेछ । विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । वृष छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । नजिकको व्यक्तिबाट सहयोग पाईनेछ...
११ भाद्र २०७६, बुधबार ०५:०६ August 28, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on नयाँ काम थाल्दै हुनुहुन्छ ? आज ११ भाद्र पाथीभरा माताको दर्शन गर्दै राशिफल हेर्नुहोस्
मेष अनावश्यक यात्रा तथा अनावश्यक झमेलामा परिएला । मनोरञ्जनमा लाग्दा अवसर गुम्न सक्छ । मनमा सङ्का सङ्का उब्जीएला । वृष आत्मिक सन्तुष्टि मिल्नेछ । विद्यामा सफलता पाइएला । जोश,जाँगर बढ्ला । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । विवादमा विजयी ह...
१० भाद्र २०७६, मंगलवार ०४:०८ August 27, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on आज मंगलबार अर्थात् पापीबार (क्रुरबार) काली माताको दर्शन गर्दै नयाँ कामको थालनी गर्नुहोस्
मेष अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । बुद्धिको उपयोग गर्नाले जटिल ठानिएको कामसमेत सम्पादन हुन सक्छ । वृष लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरु पुरा हुनेछन् । रमाइलो यात्राको सम्भावना छ र त्यसबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्नेछ । ...
९ भाद्र २०७६, सोमबार ०५:५५ August 26, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on डेंगुका बिरामीलाई कस्तो आहार खुवाउने ?
शिल्पी कुमारी डेंगु ज्वरो एक गम्भीर फ्लु जस्तो बिमारी हो, जसले जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई पनि असर गर्छ। डेंगु ज्वरोका लक्षणहरू अन्य धेरै भाइरल फेवरहरूलाई ओभरल्याप गर्दै छन्। त्यस कारण डाक्टरहरूद्वारा यसलाई बारम्बार गलत निदान गरिन्छ। आजको परिदृश्यमा...
९ भाद्र २०७६, सोमबार ०५:०९ August 26, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on कुनै नयाँ कामको थालनी गर्दै त हुनुहुन्न ? एकचोटी ०९ भाद्रको राशिफल हेर्नुहोस्,
मेष गरेको कार्यमा सफलता मिल्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रको काम अघी बढ्नेछ । व्यवसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । विद्यामापनि सफलता पाइनेछ । वृष आज धनार्जनका स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । आत्मबल बढाएर काम गरेमा असफल ...
आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात् ‘मोहरात्रि’
५ भाद्र २०७६, बिहीबार २३:१४ August 22, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात् ‘मोहरात्रि’
आज भाद्र कृष्ण अष्टमी । प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्णअष्टमीका दिन मनाइने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व शुक्रबार ‘आज’ श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी धुमधामका साथ मनाइँदैछ । ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान् श्रीकृष्णको जन्म द्वापरयुगको अन्त्यतिर भाद्...
के नयाँ काम थाल्ने जमर्काे गर्दै हुनुहुन्छ ? आजको राशिफल हेर्नुहोस्
५ भाद्र २०७६, बिहीबार २२:३९ August 22, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on के नयाँ काम थाल्ने जमर्काे गर्दै हुनुहुन्छ ? आजको राशिफल हेर्नुहोस्
मेष गीत संगीत तथा कला साहित्यमा समय दिनेहरुले मनग्गे लाभ लिन सक्नेछन् । प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ । कामहरु समयमा नै सम्पन्न हुने हुनाले थप काम गर्न जोस जागर बढेर आउँनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने आम्दानीका बाटाहरु फराकिला हुनेछन् । अध्य...
पुनर्जन्ममा तपाई कति विश्वास गर्नुहुन्छ ? अब थाहा पाउनुहोस् पुनर्जन्म कसरी हुने रहेछ
४ भाद्र २०७६, बुधबार ०६:४० August 21, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on पुनर्जन्ममा तपाई कति विश्वास गर्नुहुन्छ ? अब थाहा पाउनुहोस् पुनर्जन्म कसरी हुने रहेछ
जीवन र मृत्युको बारेमा सबै भन्दा बढी ज्ञान गीतामा छ । जसलाई भगवान श्री कृष्णको वाणी भनिन्छ । हिन्दुधर्ममा जीवन मृत्यु र पुनर्जन्मलाई एक चक्र मानिन्छ । यसको कारण यो होकी भगवान श्री कृष्ण नै अर्जुनको मोह भंग गर्नको लागि गीताको उपदेश दिँदै भनेका छन् ...
४ भाद्र २०७६, बुधबार ०६:१८ August 21, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on आज बुधबार कुन भगवानको पूजा–आरधाना गर्ने ? (पूजा विधिसहित)
हिन्दु धर्ममा, हप्ताको हरेक बारलाई देवी–देवताको बार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक, अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुई दिन सोहि बारअनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन्। जुन दिन जुन भगवानको विशेष दिन हो सोही भगवानक...
कुनै नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आज ०४ भाद्र २०७६ बुधवारको राशिफल
४ भाद्र २०७६, बुधबार ०५:५७ August 21, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on कुनै नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आज ०४ भाद्र २०७६ बुधवारको राशिफल
मेष भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्त्व जमाउन सकिनेछ । पठनपाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ । मुद्धा मामिलामा सफलता मिल्नेछ । वृष समय प्रतिकुल भई कुलतमा मन जानेछ । घर परिवारमा झैँ–झमेलाको अवस्था आउला । लगनशीलताको कम...
३ भाद्र २०७६, मंगलवार ००:५२ August 20, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on आज मंगलबार गणेश भगवानको पूजा गर्नुस्, ज्ञान, बुद्धि र विवेकले सम्पन्न बन्नुस्
मङ्गलबारको दिन मङ्गल ग्रहलाई समर्पित गरिएको हुन्छ । मङ्गलबारको दिन सौर्यको सबैभन्दा नजिकको ग्रह मानिने ग्रह पनि मङ्गल नै हो । मङ्गल ग्रहलाई ज्ञान बुद्धि, विवेक र आर्थिक सम्पन्नताको रुपमा समेत लिने गरिएको छ । त्यसैले मङ्गलबारको दिन भगवान गणेशको पुजा आ...
गणेश भगवानको साथमा आजको तपाईको राशिफल
३ भाद्र २०७६, मंगलवार ००:४२ August 20, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on गणेश भगवानको साथमा आजको तपाईको राशिफल
मेष समयमा होसियार बन्न नसक्दा खर्च बढ्ने देखिन्छ। श्रमअनुसार फाइदा कमै होला। ठूलो प्रयत्न गर्दा पनि उपलब्धि उठाउन मुस्किल पर्नेछ। परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला। आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिएला। सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई भने फाइदै हुनेछ। समस्या दर्साउ...